Sharmaarke oo isagoo luguha looga xiray silsilad loo musaafuriyey dalka Talyaaniga | Somaliska
Sharmaarke oo ah 14 jir soomaali ah oo sidii dambiile u jeebeysan lugu celiyey Talyaaniga. Sawirka: SVT
Sharmaarke oo ah wiil soomaaliyeed oo 14 jir ah, ayaa waxeey dowladda Iswiidhan si qasab ah ugu celisay dalka Talyaaniga, ka dib markii la sheegay in halkaasi deganaansho laga siiyey da.diisuna ka weyn tahay 14.
Sharmaarke oo dalka Iswiidhan yimid bishii sibteembar ee sanadkii hore, ayaa wuxuu ahaa arday dhiganayey dugsiga hoose dhexe eeMellerud. Mid ka mid ah barnaamijada ka baxa telefeyshinka dalka ee la yiraahdoUppdrag granskning, oo ah barnaamij dabagal sameeya inta badan, ayaa soo diyaariyey xog ku saabsan sidii Sharmaarke loogu musaafuriyey Talyaaniga. Barnaamijka ayaa sheegay in isaga oo lugaha iyo gacmaha looga xiray ka tiinado ama silsilado,wejigana loo geliyey kiis ama bac qasab looga dejiyey dalka Talyaaniga. Halkaas oo misna lugu amray in keligiis gudaha u galo magaaladda.
Laanta socdaalka ayaa ku andacootay in qiimeyn xagga da’da ah oo ay sameeysay ku sheegeen in qfo Sharmaarke yahay qaan gaar, deganaanshana ka heeysta dalka Talyaaniga. Qareenkii u doodayey Sharmaarke oo la yiraahdo Tommy oo dhiniciisa u warmayey barnaamija Uppdrag granskning ayaa sheegay in dhaqatiirtu cadeeymahoodu ku muujiyeen in Sharmaarke aanu aheyn qaan gaar. Hase ahaatee laanta ku dooday in uu da’ ahaan ka weyn yahay intaas. Talyaanigana ku heeysto sharci isagoo ah qof weyn.
Anette Pahlén Johansson, waa macalimadii fasalkii uu dhiganayey, waxaa qudheeda u warameysa barnaamijkaasi ayaa farta ku fiiqday, in Sharmarke u muuqdo qof weyn hadana carruurnimo ay ka muuqato.
Haatan oo ay ka soo wreegtay bilooyin markii Sharmaarke laga musaafuriyey dalka Iswiidhan ayaa qareenkiisu waxa uu sheegay in uu ku sugan yahay xaalad murug leh, iyadoo halkaasina aaneey u joogin cid ka warqabta. Wuxuu sheegay oo kale inuu qorsheeynayo inuu racfaan u dirayo maxkamada laanta socdaalka.
Sharmaarke waxa uu dhiganayey fasalka sideed markii 12-kii bishii meey ee sanadkan ay ciidan boolis ah ka kaxeeyeen iskuul uu dhiganayey, waxaana muddo ka dib loo musaafuriyey isagoo sidii dambiile ah u xir xiran dalka Talyaaniga halkaasi barnaamijka Uppdrag granskning uu ku booqdaya kana diyaariyey barnaamij la xirriiri dib u celintiisii qasabka aheyd iyo sidii xaquuqdiisii loogu tuntay.
Ari Firm Ayaan rabaa ari inaan ka gato xagee kala soo xariiiraa Jimcale
waa ka xumahay sida arxan darada ah ee wiilkan yar loola dhaqmay qof cunsuriya ayaa kiiskiisa hayey oo aan naxariis lahayn kuwa celiyeyne waa la mid